Edson Glauber - Miverena amin'ny Tompo raha haingana araka izay azo atao - Manisa ny Fanjakana
Edson Glauber - Miverena amin'ny Tompo haingana araka izay azo atao
Mpanjakavavin'ny rosary sy fiadanan'i Edson Glauber	:
Niseho tamin'ny anjely maro teo ankavanany sy haviany i Masina Maria. Nomeny anay ity hafatra manaraka ity:
Fiadanana, zanaka malalako, fiadanana!
Anaka, izaho Neny avy any an-danitra hangataka anao hanova ny fiainanao ary hiverina any amin'ny Tompo araka izay azo atao, raha manome fotoana ho anao fiovam-po ianao. Na izany aza, hifarana io fotoana io, anaka sy zava-nitranga lehibe hanova ny fiainanao mandrakizay.
Avelao ny fiainam-pahotana ary hibebaka amin-kitsimpo noho ny nanafintohinana ny Ray Mandrakizay ary noho ny tsy nitia Azy tahaka ny tokony ho azonao.
Miangavy anao aho: mivavaha, mivavaha toy ny mbola tsy nivavahanao hatrizay hatrizay, ary atolory ny zava-drehetra amin'ny Fonian'Andriamanitra Jesosy Zanako ho fanonenanao ny fahotanao sy ny fahotan'izao tontolo izao, ka mitalaho amin'ny fiovam-po amin'ny fanahy rehetra. Tiako ianao ary miarahaba anao anio ao anaty Foko tsy maloto ato amiko.
Raiso ny fahasoavako sy ny fitahiako, amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen!
-Aoza 2, 2020
Fiadanana ho an'ny fonao!
Anaka, ambarao amin'ny zanako rehetra: haingana, haingana, haingana. Raha te-handresy ireo zava-dratsy atahorana manambana azy ireo ny rehetra dia tokony hivavaka isan'andro ny Rosary isan'andro izy ireo, ka mifady hanina sy hanao sorona ho tombontsoan'izao tontolo izao sy ho an'ny fandriam-pahalemana. Ny devoly te-hitondra fangirifiriana bebe kokoa amin'izao tontolo izao, ary ny zanako rehetra dia mila manondrika ny lohalika amin'ny tany sy hanelanelana, mba hanakanana ny fikasan-dratsiny. Henoy ny antsoko amin'ny vavaka sy ny fiovam-po, ary homen'Andriamanitra anao hatrany ny fahasoavana fandresena amin'ny ratsy rehetra. Henjehina ianao, nefa aza matahotra na inona na inona. Ny Tompo no eo anilanao hiaro sy hanampy anao ary amin'ny alalanao no hanehoany ny avonavona fa Izy no Tompo.
Misaotra anao koa aho, ary koa ny olombelona rehetra: amin'ny anaran'ny Ray, ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen!
-Aoza 1, 2020
Pedro Regis - Taona lava… →
Apôstôly amin'ny andro farany
Pedro Regis - krizy lehibe amin'ny finoana
Gisella Cardia: hitsangana amin'ny maty sy marefo ny fiangonana
antikristy Fivadiham-pinoana Malagasy Bill Gates fiangonana katolika famaizana Chastisements fiangonana fifanjevoana fanaraha-maso Covidien-19 division Ny fandriam-pahalemana Eokaristia finoana tahotra Fr. Michel Fianakaviana masina Fahazavana momba ny feon'ny fieritreretana Mametaveta ny fo Jesosy Toniam-pampianaran'ny Mary New World Order Ilay Reninay fanenjehana Fiarovana ara-batana Papa vavaka fisoronana faminaniana fanadiovana fialofana revolisiona sapile fisarahana Soratra Masina Fiarovana ara-panahy fitsapana fahoriana Triumph fahatokiana fahamarinana ady fampitandremana
Nomen'Andriamanitra Fr. Michel Rodrigue manana fanomezana ara-tsaina sy ara-panahy mahavariana, toy ny fanasitranana, famakiana fanahy, fahatsiarovana sary (izay nihena taorian'ny aretina maro sy ny aretim-po valo!), Faminaniana, valiny, ary fahitana. Manana toe-tsaina mahafinaritra sy fihomehezana izy, ary mandritra izany fotoana izany, misy fahatsapana lehibe amin'ny zavatra momba an'Andriamanitra. Exorcist ofisialy ofisialin'ny Fiangonana izy, ankoatry ny andraikiny amin'ny maha-mpampianatra seminera, minisitry ny hôpitaly, pretra paris, ary vao haingana, amin'ny maha-mpanorina sy Superior Jeneraly ny fraternity ara-pivavahana vaovao any Quebec izay miteny frantsay. Fr. Mahazo ny fanohanan'ny evekany i Michel Rodrigue, ary ny zava-misy rehetra sy ny fahitana azony dia natolotra ny olom-banona mahazatra azy mba hankatoavina.